जुवाडेले फैलाए कोरोना ! – Namaste Dainik
September 6, 2020 NamastedainikLeaveaComment on जुवाडेले फैलाए कोरोना !
आइतवार एक महिला र २१ पुरुषमा कोरोना पुष्टि भएको हो । थपिएका मध्य १९ जना पुरुष तास खेल्ने जुवाडे हुन् । दुईजना विदेशबाट आइ क्वारेन्टाइनमा बसेका र एक सरकारी कर्मचारी हुन् । १९ जनालाई प्रहरीले केही दिन अघि तासको खालवाट पक्राउ गरी क्वारेन्टिनमा राखेर स्वाब परिक्षण गरिएको थियो । उनीहरुको आइतवार रिपोर्ट आउँदा पोजेटिभ देखिएको हो । २२ जना जुवाडे पक्रउ परेकोमा १९ जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको हो ।
योसंगै स्याङ्जामा कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या ३ सय ३७ पुगेको छ। आइसोलेसनमा बस्नेको संख्या घटेर ५ जना पुगेका बेला आइतवार बिहान २२ जना थपिएका हुन् ।
BREAKING: सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका लागि गर्यो यस्तो महत्त्वपूर्ण निर्णय !
अन्तत : आमा छोरा काण्डको भित्रि रहस्य यस्तो रहेछ , हेर्नुस घटनाको सबै पर्दाफास (भिडियो सहित)